Olee otú selectively Weghachi Photos si iTunes ndabere
> Resource> iTunes> Olee otú iji selectively Weghachi Photos si iTunes ndabere
Na-eme iTunes ndabere photos na ihe iDevice?
Azịza ya bụ ee. Ọ bụrụ na ị na mgbe weghachiri eweghachi gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka metụ iTunes ndabere, ị ga-mara ya. Mgbe ị na mmekọrịta gị na iDevice na iTunes, ọ ga-n'ịwa a ndabere na-akpaghị aka maka ngwaọrụ gị, na mmelite ya oge ọ bụla mgbe ị na-mmekọrịta. Ị nwere ike iweghachi ihe ndabere ka ngwaọrụ gị mgbe e mesịrị mgbe i nwere mkpa, ma ị mkpa iji weghachi dum na onye na-enye elu ẹdude data na ngwaọrụ gị. Nke ahụ bụ na-ekwu, ị ga-naanị nwere nkwado ndabere na mpaghara ọdịnaya na ngwaọrụ gị mgbe mmekọrịta. Ọzọkwa, ị pụrụ bụghị ihuchalu ma ọ bụ selectively naghachi akụkụ nke data. Niile ma ọ bụ ihe ọ bụla, nke ahụ bụ ihe iTunes ike ka ị na-eme.
Olee otú selectively naghachi foto site na iTunes ndabere
iTunes adịghị ekwe ka ị hụchalụ ọdịnaya nke ndabere, ka naanị ewere data n'ime ya. Gịnị ka anyị kwesịrị ime ma ọ bụrụ n'ezie na anyị chọrọ ka ịhụchalụ na naghachi nanị foto site na iTunes ndabere? Ị nwere ike ijikwa ya, dị nnọọ mkpa iTunes ndabere extractor dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac). Nke a software-enye gị ohere ịhụchalụ niile nkọwa na iTunes ndabere faịlụ, na i nwere ike selectively naghachi ọ bụla ị chọrọ site na ya. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-enye gị ikpe version. Ọ bụ kpam kpam free n'ihi na ị ka ịhụchalụ na ego na iTunes ndabere ọdịnaya. Download ikpe mbipute n'okpuru maka free ugbu a!
Mgbe nbudata na na na wụnye usoro ihe omume na kọmputa gị, ka ego otú ọ na-arụ ọrụ iji weghachi foto ndị si iTunes ndabere. Ma nsụgharị nke software ka ị na-eme dum na-arụ ọrụ 2 nzọụkwụ, na usoro yiri nke ahụ. Ọzọ, ka na-na Windows version dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 1. wepụ iTunes ndabere maka Michael
Ka a okwu nke eziokwu, Wondershare Dr.Fone maka iOS-enye gị ụzọ abụọ iji naghachi data si iOS ngwaọrụ: kpọmkwem naputa site na iOS ngwaọrụ ma weghachi si iTunes ndabere. Adịrị foto site na iTunes ndabere, mkpa ka anyị jiri nke abụọ ụzọ. Dị nnọọ pịa menu n'elu nke usoro ihe omume si window. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ window n'okpuru.
The omume nwere ike na-akpaghị aka ịchọpụta niile iTunes ndabere faịlụ ẹdude na kọmputa gị. Họrọ onye na ebe ị na-eme atụmatụ iji weghachi photos, na pịa na Malite iṅomi button na-amalite adịrị.
Nzọụkwụ 2. Weghachi nanị foto site na iTunes ndabere
Doppler usoro ga-ewe gị nanị ole na ole sekọnd. Mgbe ọ na-akwụsị, ị nwere ike ihuchalu ọdịnaya niile na zuru ezu. N'ihi na foto, ị nwere ike ihuchalu ha na edemede nke Igwefoto Roll na Photo Stream. Tinye akà rà na ihe ị chọrọ mgbe Michael, na-azọpụta ha ka ha na kọmputa gị site na ịpị Naghachi bọtịnụ.
Cheta na: E wezụga ẹdude foto na iTunes ndabere, Wondershare Dr.Fone maka iOS nwekwara ike inyere ịhụ na naghachi ehichapụ photos (bụghị overwritten ndị) na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ha, ị nwere ike naghachi ha, kwa.
Download ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị ugbu a!
Naghachi iPhone ozi: Nke a ndu-egosi gị otú iji weghachite ehichapụ ozi ederede site na iPhone ụzọ dị iche iche. Naghachi ehichapụ foto na iPhone: Isiokwu a na-egosi gị otú ị naghachi ehichapụ foto na iPhone ụzọ dị iche iche. Naghachi iPhone iMessages: Ị nwere ike naghachi ehichapụ kọntaktị enweghị a ndabere na iPhone na 3 nzọụkwụ ala.
Top 3 iPhone ndabere extractor maka Windows na Mac
The Best Tenorshare iPhone Data Recovery Alternative
TunesGo-eme gị music, na-eme ihe iTunes ike.
iTunes Data Recovery: selectively Naghachi iDevice si Data si iTunes
3 Ụzọ Nyefee Music si iTunes ka Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 / S2 / S
Top 10 Alternatives maka iTunes nyefee Music si PC ka iPhone / iPad / iPod
Ihe niile ị ga-achọ ịmara banyere iTunes na iCloud backups
Olee ka ume iTunes n'ọbá akwụkwọ
Olee otú iji weghachi iTunes Library si iPod
Olee otú ndabere iPhone SMS enweghị iTunes
Chọpụta iTunes Songs 'aha na Tunatic
iTunes maka gam akporo: Jikwaa gị Android ọdịnaya effortlessly
Otú nyefee Videos si iPod ka iTunes